Tandremo ny ankisisika • AoRaha
Tandremo ny ankisisika
Higadona an-tanindrazana anio, ireo maherifon’ny Malagasy, nandranto ady tany Ejipta. Hafaliana tsy omby tratra no hitsenan’ny vahoaka azy ireo satria nahavita be tamin’ny fiarovana ny voninahi-pirenena. Fety be manaraka ny arabe ary tena hakotrokotroka tsy hisy tahaka izany ny ho fandraisana azy ireo.
Na eo aza anefa izany hafanam-po izany, mila mitandrina ihany isika rehetra. Iaraha-mahalala rahateo fa rehefa ao anatin’ ny fientanam-po ny Malagasy dia tsy maintsy ady sy tolona. Tsy misy manaiky ho tara mihitsy rehefa misy toe-javatra mampivorivory. Lesona azo tsoahina ireny tranga nahafatesana olona teny Mahamasina, nandritra ny Fetim-pirenena ireny. Amin’izao miara-mahita isika fa mihoatra lavitra noho ny Fetin’ny 26 jona ny firaisam-pon’ny vahoaka malagasy. Noho izany, tsy maintsy ho ankisisika ny fitsenana ireo mpilalaon’ny Barea, manomboka eny amin’ny seranam-piaramanidina, ka hatreny amin’ny lapam-panjakana.
Samia mitandrina! Na eo aza ny hafaliana sy ny fitiavana an’ireo mpilalao, aoka samy handini-tena ihany fa lahitokana ny aina! Ny Barea hisy foana ary ny fifankatiavana tsy hanam-pahataperana, ka aleo lehiretsy mba hohalavirina ny ankisisika a! Ataovy ampy ny maso mahita, sao sanatria ka hosembanin-drahona indray ity hafaliana iainantsika Malagasy manontolo ity. Ny mpanararaotra rahateo maro ary tsy mba misy tandroka tahaka ny barea, koa samia mailo!
Maizina ny ampitso!
Kaongresy nasionalin’ny Tim
Fifidianana ben’ny tanana :: Hikendry haka ny toeram-badiny i Marc Ravalomanana